Pantone Oo Bilaabay Tijaabada IQ Midabka Farshaxanada, Nakhshadeeyayaasha Iyo Xirfadlayaasha | Abuurista khadka tooska ah
Midabka IQ Imtixaanku waa tijaabooyin taxane ah taasi waxay aad ugu egtahay ciyaar aan ka hadalnay dhawr bilood ka hor. Waan jeclahay midabku waa mid ka mid ah cayaaraha cajiibka ah ee aan ku qasbanaanayno inaan dib u dhigno midabada kala duwan ee taxanaha safafka midabada ah si aan dib ugu soo ceshano gooldhaliyihii naloo baray bilowgii ciyaarta.
Waana tan la mid ah waxa Pantone ku siiya tijaabada midabkiisa IQ iyo habkaas oo lagu tijaabiyo awoodaada inaad ku kala soocdo hooska kala duwan si dib loogu cusbooneysiiyo wejiga. Imtixaan ka badan oo xiiso leh oo lagu shaqeynayo midab ka dibna awood u leh in lagu dabaqo aqoonta qaybaha kala duwan ee shaqada.
Shaygu waa wax fudud. Waxaad u baahan doontaa oo keliya inaad sameysatid codadka si aad u abuurto midab kala go 'leh adigoo saf u galaya meelihii la soo barakiciyey saf kasta. Sidaan soo sheegnayba waa raad raac ciyaarta Waxaan jeclahay hue in aad diyaar u tahay aaladaha mobilada.
Waxay sidoo kale xiriir dhow la leedahay Farnsworth Munsell 100 Hooska Tijaabada Aragga Aragga. Tijaabooyinka waa la samayn karaa laga soo xigtay, oo kuma qaadan doonto wax ka badan daqiiqado inaad sameyso.
Farqiga udhaxeeya ciyaarta aan soo sheegnay ayaa ah in uu leeyahay tiro heerar wanaagsan ah, sidaa darteed hadaad jeceshahay inaad madadaalo oo aad midab ku tababbartoMarka laga reebo aaladda Pantone, waxaan kugula talineynaa inaad siiso isku day, maaddaama waayo-aragnimada ay siineyso ay tahay mid aad u fiican.
Waxay kuxirantahay acuity-gaaga, waxay kugu qaadan kartaa waqti ama in kayar, maadaama aan wajaheyno barnaamij mareeg ah oo Pantone lafteeda lafteeda waxay kugula talineysaa inaad jaangoyso kormeeraha si aad u kala garato midabka si wanaagsan.
Markaad gradientka diyaar u tahay, kaliya waa inaad gujisaa "Score my test" si aad u aragto natiijooyinka. Waxay noqon doontaa a garaaf wareegsan oo tilmaamaya gobollada midabbada muuqaalka halka midab takoorku midabkiisu hooseeyo.
Una qalab weyn oo nooc kasta oo farshaxanno ah, naqshadeeyayaasha iyo xirfadlayaal ku shaqeeya midabka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Pantone Color IQ Test waa tijaabo loogu talagalay naqshadeeyayaasha si ay u dardar geliyaan xirfaddooda midabbada